IBSA EJJENNOO TBOM
Injifannoon qabsoon Oromo haga ammaa galmeesse hundi sababa qabsoo hidhannoo tiin kan argaman ta’u hubachuu qabna. Mirgootni kunis kan galmeeffaman miseensota fi ummata keenya kuma hedduu dhaan lakkaawaman wareegama itti baasanii, maatiin kuma hedduun itti diigamee, qabeenyi hedduun itti dhabame fi qabsaawotni kuma hedduun itti dararamanii ta’uunis ifaa dha. Wareegama kanneeniin alatti bu’aan argamuu fi sadarkaan dammaqiinsi ummata keenyaa har’a irra gahe fiduun hojii salphaa ta’uu hin dandahu ture. Gaaffiin Oromoo gaaffii haqaa ta’uun fi ajandaa siyaasaa gaanfa Afrikaa keessa seensisuun kan danda’e sababa qabsoo hidhannootiin ta’uun beekamaa dha. Dhimma kana madaala isaa hubachuuf, gaafa ABOn ijaaramee qabsoo eegalu; haalli sabbonummaa ummata Oromoo maal keessa ture? jirreenyi ummata keenyaa addunyaa irratti hagam beekamaa ture? jedhanii gaafachuu gahaa dha. Dagaagginni sabbonummaa Oromoo har’a mul’atu fi dhimmi Oromoo beekumsi naannoo fi addunyaa keessatti horates bu’aa qabsoo hidhannoo wareegama ilamaan Oromoo hedduu dhaan argame ta’uun falamsiisaa miti.
WBOn injifannoolee armaan olii galmeessee fi bilisummaa saba Oromoof jecha falmaa hadhaahaa gochaa ture ammas itti jira. Har’a illee gootowwaan keenya guyyuu diina kuffisaa kufaa jiru. Kanaaf guyyaa WBO, Amajjii 1, kabaja, ulfinaa fi guyyaa injifannoo ta’uun yaadatamee oola. Addi Bilisummaa Oromoo Amajjii 1, guyyaa WBO akka tahu kan murteesse sababa malee miti. Innis:
Bara 1978 walakkeessa irraa kaasee haga dhuma 1979tti ABO haala akkan rakkisaa keessa ture. Yeroon kun yeroo lolli Somaliyaa fi Itophiyaa dhumatee, waraanni Ziyaad Barree arihamee bahee, mootummaan Dargii humna ABO kan reef ijaaramaa jiru dhabamsiisuuf duula wal irraa hin citne itti bobaase ture. Waraanni Bilisummaa Oromoo Baalee, Arsii fi Harargee keessatti duula kana of irraa deebisuuf lola cimaa seene. Qunnamtiin isaa addaan citee ni faca’aa yaaddoon jedhu illee guddaa ture. Qabsoon haqaa yoomuu waan injifatuuf jagnootiin WBO duula Dargii of irraa deebisanii Amajjii 1, 1980 walitti dhufanii ayyaana guddaa ayyaaneffatan. Bara 1980 irraa kaaee guyyaan WBO bara baraan guyyaa WBO fi guyyaa injifatnoo ta’ee kabajama.kanaaf nutis Ibsa Ejjeennoo tokkummaa Barattoota Oromoo biyya jarmanii fi hawaasnni oromoo Kabajaa Ayyaanaa waggaa haaraa guyyaa Ayyaanaa WBO Amajjii 10/2015 ilaalchisuun akka armaan gadiitti dabarfanna.
Haalaa siyaasaa Oromoo fi Oromiyaa gidduu-galeessaa godhachuun dararamaa lubbuu fi mana hidhaa mootummaa abbaa irree TPLFfi OPDOn baratootaa,barsiisotaa Qotee bultotaa, daldaltotaa, hojjetootaa, fi hawaasaa Oromoo cufa irraatti rawwaatamaa jiruu dhaabsisuuf FDG jabeesinee itti fufuu qaba jenna.
Maqaa master planiitiin nannoo Finfinneettii fi lafa Oromoo irraatti gaggeefamaa jiruu ummataa keenyaa qee’ee irraa buqqisee jiruu fi jireenyaan ala gochaa waan jiruuf, sirna sammichaa lafa Oromoo irraatti xiyyaafatee kana cimsinee balaaleffaachuun, Ummatichaa cina dhaabbaachuun FDG ni qindeesina. Bira dhaabbanna.
Qabsayyonni oromoo kan biyya kessa jiran, siidaan Gootota Oromoo Maqaa Walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa saba isaanitiif wareegaman handhuura oromiyaa tantaate finfinnee kessatti akka dhaaban waamicha keena dabarfanna.
Seenaa goototaa Oromoo qorachuun Ifatti baasanii barreessuu, kaayyoo isaan irraatti wareegamaan galmaan ga’uuf kutannoo fi murannoon qabsoo bilisummaa Oromoo ABO’n gaggeeffaamu fiixaan ni baasna.
Sirna TPLF golgaa dimookiraasii godhachuun umrii abbaa irruummaa nurraattii dheereffaachaa jiruu tokkummaan duraa ni dhabbanna,
Tokkummaan Baratootaa fi Jarmiyaa qofaan ga’aa miti jechuun Ummataa Oromoo sadarkaa qotee bulaa, hojjetootaa, barsiisotaa, dafqaan bultotaa, hojii dhabdootaa, daldaltota, fi Poolisotaatti cimsuun bu’aa tokkuummaa barsiisuun, waliigalatti tokkummaa ummataa cimsuu, akkasumaas baratootaa manneen barnotaa sadarkaa 1ffaa,2ffaa fi Qophaa’inaa irraa baraataan ijaaruun jaajjabeesuun FDG bifaa qindaa’een akka finiinu wamicha keenya ni dabarfanna.
Ilmaan Oromoo baleessaa malee Oromummaa isaanii qofaan yakkamanii yeroo garaagaraattii naannoo Oromiyaa garaagaraa irraa humnaan qabamanii Mana hidhaa wayyaanee garaagaraa keessaatti murtee seeraa dhabuun, garii isaanii irraatti immoo murtee sobaa dabarsuun mana hidha keessaatti dararamaa jiran daddaffiin haal duree tokkoo malee akka hiikamaan gaaffii walitti fufinsaa qabu ni gaggeesina.
Walitti Dhufeenyaa tokkummaa Hoggaantootaa Qabsoo bilisummaa Oromoo ABO gidduutti godhamee ni dinqisiifanna, fiixanbahinsaa tokkuummaa kanaaf gumaachaa barbaachiisuu ni goona. Jechuun guyyaa ayyana WBO Amajjii 10/2015 tokkummaan baratoota oromoo biyya jarmanii sinna ho’aan kabajatee oolaa jira.
Kanaaf jecha dhaabbilee siyaasaa ta’ee ,caasaan hawaasa Oromoo Oromiyaa keessaa fi biyya ambaa maadheffatanii jiran, akka oromooti hiree tokko qabaachuu keenya hubannee tokkummaa fi danboobina mooraa qabsoo Oromoo keessatti fiduuf tokkummaan baratoota oromoo biyya jarmanii adda duree ta’ee kan hojatu ta’uu isaa carraa kanatti gargaaramuun ummata Oromoo fi qabsa’ota Oromoof waadaa seena. Waada seenu keenna yeroon mirkaneessinu jecha armaan gadii kana jennee mirkanessina.
Qabsa’aan ni kufa, Qabsoon itti fufu
Wareegama qofaan bilisummaan dhufa.
Gadaan gadaa bilissummaa rabbi nuuf haagodhu